Dowladda Soomaaliya: Albaabka wadahadalka waa furanyahay balse go’aankii baarlamaanka waa sidiisii – Kalfadhi
Qaadacaaddii Guddoomiyaha Aqalka Sare
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa sheegay in xeerkii uu Golaha Shacabka ee Aqalka Hoose ku ansixiyay muddo kordhinta dowladda ahaa mid aan waafaqsaneyn dastuurka oo ay ahayd in lasoo mariyo Aqalka Sare.
Wareysi uu BBC-da siiyay ayuu sidoo kale guddoomiyaha ku xaqiijiyay in xiriirka ka daxeeya isaga iyo guddoomiyaha Golaha Shacabka uusan wanaagsaneyn.
“Qodobka 55-aad ee Dastuurka Federaalka Soomaaliya ku meel gaarka ah ayaa sheegaya inuu baarlamaanka Soomaaliya ka kooban yahay labo aqal oo kala ah Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare. Waxaan idiin sheegayaa in sharci kasta oo baarlamaanka Soomaalida sameeyo waa inay labada aqalba ansixiyaan, Markii ay labada aqal ansixiyaan waa inuu madaxweynaha u tagaa oo uu saxiixaa,” ayuu yidhi Cabdi Xaashi.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in “hal aqal uusan gaar u lahayn inuu sharci kaligiis ansixiyo”.
‘Waa in la dhowraa xuquuqda dimuqraadiyadda ee dalka’
Qaar ka mid ah wakiillada iyo danjirayaasha dalalka shisheeye u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen go’aanka uu Golaha Shacabka ee dalka mudada ugu kordhiyay hay’adaha dowladda iyo baarlamaankaba, iyagoo ka digay in arrintaasi ay sii horun doonto khilaafkii siyaasadeed.
Mareykanka, Midowga Yurub iyo UK oo bayaanno kala duduwan soo saarayna waxa ay ka digeen inay dib u eegi doonaan xiriirkii ay la lahaayeen dowladda federaalka halka uu Mareykanku sheegay inuu cunaqabatayn ku soo rogi doono shakhsiyaad aanay shaacin waxa ay yihiin.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bayaan kasoo baxay waxay ku sheegtay in si aad ah uga xumaatay inay aragto hadallada bulshada ee qaar ka mid ah saaxiibbadeeda caalamiga ah iyo saaxiibbada muddada dheer ay ku marin habaabinayaan sharciyada ay soo saaraan hay’adaha dowladda ee lagu ilaalinayo xuquuqda dimoqraadiyadda ee shacabka ee ay ku dooranayaan hoggaankooda.
Dowladda ayaa sheegtay Sida ay dhammaantood goobjoog u ahaayeen sagaalkii bilood ee la soo dhaafay, labo ka mid ah toddobadii saxiixayaasha heshiiska 17 Sebtember 2020, oo kala ah hoggaamiyeyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland, iyagoo ku dhaqmaya cadaadis ba’an oo kaga imanaya saameynta shisheeye, waxay isku dayeen inay hakiyaan oo afduubtaan howsha iyagoo abuuraya dalab aan dhammaad lahayn iyo iyagoo ku baaqaya in la burburiyo hay’adaha dowliga ah ee qaranka.
Suuragal ma tahay in wadaxaajood dib loogu laabto?
Beesha caalamka ayaa ku baaqaysa in wadaxaajoodyada dib loogu laabto si doorasho loo qabtom, waxayna ka fal celiyeen tallaabada muddo kordhinta oo ay ku tilmaameen mid aan loo baahneyn.
Dalalkan oo Soomaaliya ka caawiya kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhinaca diblomaasiyadda ayaa rumeysan in ay suurgal tahay in marka ay madaxda Soomaalida dib isugu soo laabtaan mar kale wadaxaajood al furo.
Adaan Xasan oo ah cilimi-baare arrimaha geeska Afrika ku xeel dheer ayaa rumeysan in ugu dambeyntii dhinacyada Soomaalida ay wadaxaajood isugu iman doonaan, wuxuuna intaas ku daray in hadda xiisaddu ay kacsan tahay laakiin wali xal la gaari karo.
“Waa la isku imaan karaa waa laga tashan karaa laakiin waa in niyad sami iyo niyad wanaag ay jirtaa,” ayuu yiri.
“Hadda sida ay tahay arrinta xiisadda ayaa sare u kacday laakiin wax aan la isaga imaan karin ma laha waqti walba waa la isu tanaasuli karaa, wax aan laga tashan karin oo ay maanta rag ku kala tagaan oo wadan lagu burburiyo ma laha,” ayuu yiri.
Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa ka tagay magaalada Muqdisho oo ay ku sugnaayeen dhowr isbuuc, inkastoo shirkii ay u tageen uusan yeelanin wax natiijo.
Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ka fikir duwan madaxweyne Farmaajo marka ay timaado arrinta doorashada, khilaafka ugu weynna halkaas ayuu salka ku hayay.
Laakiin saddexda maamul goboleed ee kale – Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed – ayaa u muuqday inay diyaar u ahaayeen wadahadalka ayna ma mowqif duwan yihiin Puntland iyo Jubaland. Falanqeynta waxaa martii hore lagu daabacay BBC Somali.
Akhriso: War-murtiyeed ka kooban 10 qodob oo laga soo saaray shir-weynihii ka dhacay Muqdishu